के बजार प्रतिरोध क्षेत्रमा छ ? - नेपालबहस
| १६:४८:०७ मा प्रकाशित
भाद्र ३०, काठमाडाैं । आज पनि प्रतिरोध क्षेत्र भन्दा माथि बजार बन्द हुन असफल भएको छ । नेप्से परिसूचक ४ दशमलव ४७ अंकले घट्दै १५३६ दशमलव ०३ को विन्दुमा बन्द भएको छ । आज १९३ कम्पनीको शेयर कारोवार हुँदा जम्मा २ अर्ब ११ करोडको कारोवार भएको छ ।
तीन दिनको मैनबत्तीहरुले “इभिनिङ्ग स्टार” मैनबत्तीको चित्र बनाएको छ । यसले बजार केही सच्चिन सक्ने संकेत गर्दछ । आजको परिमाणले बजारमा विक्रेता हावी रहेको जानकारी गरेको छ । बजारले १५५० को क्षेत्र वरीपरी प्रतिरोध बनाएको देखिन्छ । बजारले निकै पटक यो क्षेत्र भन्दा माथि जान खोजे पनि सफल हुन सकेको छैन ।
आज बजार १५४४ दशमलव ७२ को विन्दुमा खुलेकोमा बजारको न्यून विन्दु १ बजेर २६ मिनेटमा १५३१ दशमलव ०५ रहेको थियो । बजारले ११ बजेर ०९ मिनेटमा १५४८ को उच्च विन्दु समातेको थियो ।
आजको ईण्ट्राडे ग्राफ :
दैनिक नेप्सेको ग्राफ :
प्रतिरोध २ः १५६० । प्रतिरोध १ः १५४० । टेवा १ः १५३० । टेवा २ः १५००
✍ आज शेयर बजार घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ। तीन दिनको मैनबत्तीहरुले “इभिनिङ्ग स्टार” मैनबत्तीको चित्र बनाएको छ। यसले बजार केही सच्चिन सक्ने संकेत गर्दछ । आजको परिमाणले बजारमा विक्रेता हावी रहेको जानकारी गरेको छ।
✍ दैनिकी अवधिमा “आरएसआई” ६९ दशमलब ६५ को बिन्दुमा छ। यसको प्रवृत्तिले बजारमा शेयर बढी खरिद भएको जानकारी गरेको छ।
✍ “एडीएक्स” ले हालसम्म बजारमा क्रेताको चाप रहेको संकेत गरे पनि जोड / बिजोड “डाइरेक्सनल इन्डेक्स”हरुले आज विक्रेताको चाप रहेको जानकारी गराएको छ।
✍ “अन ब्यालेन्स भल्यूम” ले आज बजारमा विक्रेताको चाप रहेको जनाकारी गराएको छ।
यदि बजार १५४० भन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार पुन सकारात्मक हुनसक्ने संकेत गर्नुका साथै बजारले १५६०को क्षेत्रलाई प्रतिरोधको रुपमा सामना गर्न सक्ने देखिन्छ। तर यदि बजार १५३० भन्दा तल स्थिर रहेमा बजार अझ केही सच्चिन सक्ने देखिन्छ र अर्को तत्कालिन टेवा १५०० को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ।
“ईण्ट्राडे-लो”मा बजार बन्द हुँदा पनि हाईड्रोपावरका लगानीकर्ताहरु मालामाल हुने क्रम जारी १२ घण्टा पहिले
बजार प्रतिरोध क्षेत्रमा कायमै, प्राविधिक बिश्लेषणले के देखायो ? ३ दिन पहिले